Shiinaha Ilkaha Lab, ilkaha Lab, ilkaha aaladaha, taaj Oo Bridge - Foo Tian
Galaas dhisnayd in biraha
U dir jagadii
Gudbinta tayada ilkaha shuqullada caalamiga shaybaarka
Bixinta adeeg shakhsi lagu dayan karo
Isticmaal CE kaliya ama qalabka FDA ansixiyay
CAD Cam aaladaha
Halkii maal iyo ridaya for dhismeedka biraha waxaa ka buuxay buundada galaha xafiiltamaan ee, waxaan ka dhigi qaab-dhismeedka bir ah buundada buuxa xafiiltamaan galaha jidka Cam CAD ah, waxa uu milled by mishiinka axdi qarameedka, taas oo ka dhigi kartaa hubiyo sax sare iyo saxsanaanta. Waxaa soo baxay in ka badan ayaa sax ah, sidii isagoo had iyo jeer si fiican u haboon oo aan wax hagaajin yar.
CAD Cam Malo Full halka aaladaha lagu Bridge
CAD Cam Malo aaladaha lagu Bridge
Full halka Zirconia aaladaha lagu Bridge
Full halka aaladaha lagu Bridge
View All CAD Cam aaladaha
Xiri ceshan taaj-galaha la dhigtay files scan digital. taaj iyo buundooyinka Waxaan ka dhigi kara ma aha oo kaliya in hab caadiga ah, laakiin sidoo kale ka dhigi kartaa jidka horumar leh kula files scan digital. Tani waa arrin aad u sahlan tahay ilkaha iyo bukaanka labada, sida ilkaha uma baahna in ay qaataan dareenkaa silicone sida ay mar walba sameeyo, laakiin oo kaliya ayaa qaadandoona files scan ka bukaan afkiisa, iyo bukaanka ma yeelan doonaan baakidh aragti silicone weyn gelin gudaha afkooda.
Model Oo Aragtida Scan
Result End Perfect
Ma waxaad ka cabanaya ilkaha sinnayn iyo sidoo kale ka xishoodaan in ay muujiyaan ilkaha? Ma rabtaa in aad ilkaha kaamil ah, iyo xataa? Haddaba saxaarad hufan by Foo Tian Ilkaha Lab laga sameeyey Shenzhen Shiinaha ayaa kaa caawin kara. The daaweynta saxaarad hufan oo ku lug leh qurxinta ilkaha ama dhakhtarka ilkaha, ama nidaamka guriga ku salaysan, qofka isu, qaadashada caaryada ah ee ilkaha qofka bukaanka ah, taas oo waxaa loo isticmaalaa in creat scan a ilig digital. model The computer soo jeedinaya marxaladaha u dhexeeya boosaska ilkaha hadda iyo kuwo la doonayo, iyo baakidh abuuray heer kasta. Sida caadiga ah saxaarad kasta oo hufan waa in la weared 1 ama 2 todobaad, ka dibna waxay ku bedelaan kale. Ka dib markii xiran oo dhan ku furto, markaas waxaad ka heli doontaa natiijo kama dambays ah la yaab leh oo xataa ilkaha la dhoola kaamil ah. Waa si buuxda oo hufan, taas oo iyaga ka dhigaa inay sii badan caqli badan biraha bir ah. Dadka inta badan ma iyaga aragto.
daaweynta saxaarad Transparent
si buuxda u hufan
Ma rabtaa in aad ilkaha kaamil ah, iyo xataa?
Haddaba saxaarad hufan by Foo Tian Ilkaha Lab laga sameeyey Shenzhen Shiinaha ayaa kaa caawin kara.
View All tuur Qayb
taaj zirconia A waa nooc ka caanka ah ee crownwhich dhan-dhoobada waxaa lagu xirto si loo horumariyo muuqaalka kore ee toothwhich ah ayaa noqday ama in qarribay sanadihii la soo dhaafay. Waxay yihiin waara, fududahay in la xidho oo muddo dheer socota.
Full dusha Zirconia
Taaj Zirconium la hagaajin karin Isticmaalka Dhaqanka ilkaha Cements
Dusha Full Zirconia Crown
biraha E-max Non-udiyaarin
Zirconia waa bir-free, taasoo ka hortagaysa madoobaato hareeraha meesha ciridka
View All Crown Ceramic Full
CAD Cam Malo buundada galaha
Foo Tian Ilkaha Lab, oo ku yaalla Shenzhen Shiinaha, waa Full daryeelka ilkaha Laboratory iyadoo in ka badan 100 farsamo.
Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato About Warbixiinta Tooth ...
Adeegga Full Chinese Ilkaha Lab & Shipping la Free
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Talooyin - Products Hot - Sitemap - amp Mobile
Ilkaha looxa, All Celinta Ceramic, Blocks dhoobada, Built In Micro Motor, Woodworking Machine, Dental Instruments,